Qalabka Filter magnetic - Shiinaha Ningbo Sine
General Description Filter magnetic waxaa loogu talagalay waajib culus, dareere mugga weyn iyo nidaamyada semi-dareere socodka line. Waxay bixisaa ilaalinta magnetic for khadadka dareere ah iyo qalabka processing. Waxaa si weyn loo loo isticmaalo sifeynta ee nijaasta ferrous ganaax helay saliidaha, coolants, saliidaha Haydarooliga, slurries injineerinka, dawooyinka huwanta iyo warshadaha kiimikada. Filter The magnetic waa si fudud saari karo ka Warqada ahama by dabciyeen a qaybood ah in la sii daayo degdeg ah wax yar. Waayo, t ...
Filter magneticwaxaa loogu talagalay waajib culus, dareere mugga weyn iyo nidaamyada semi-dareere socodka line. Waxay bixisaa ilaalinta magnetic for khadadka dareere ah iyo qalabka processing. Waxaa si weyn loo loo isticmaalo sifeynta ee f nijaasta ferrous ine helay saliidaha, coolants, saliidaha Haydarooliga, slurries injineerinka, dawooyinka huwanta iyo warshadaha kiimikada.
tuubooyinka magnetic joogto ah Strong go'an gal qaab. Marka wax ay ku jiraan walxaha / steel bir maraa qaab dhismeedka, walxaha birta / steel taranto doonaa derbigii Tuubooyinka gal. Sidaas darteed, qalabka iyo tas-hiilaadka noqon doonaa ammaan iyo dhawaajiyaan, iyo wax soo saarka waxay noqon doonaan isticmaalka biyo nadiif ah.
filtarrada magnetic codsan karaan in dawooyinka, nadaafadda, dharka, mashiinada iyo cuntooyinka. qofka ayaa soo jiidan doonaa walxaha birta / steel ka cabitaanno ah iska, ka mid ah badar ama boolbare.
Open iyo Download buugga soo saarka ee filter magnetic
Next: rullaluistemadka magnetic